Repoblika Serba ao Bosnia : Manampahefana ampangaina ho manao sorona eo ambony alitaran’ny fizahantany ny fahatsiarovana ilay fandripahana · Global Voices teny Malagasy
Tetezana no hitan'ny sasany, ho an'ny hafa kosa dia fandripahana
Voadika ny 04 Marsa 2021 17:06 GMT
Pikantsary avy amin'ny tranonkalan'ny fikambanana misahana ny fizahantany ao amin'ny faripiadidian'ii Višegrad maneho ho toy ny toerana raitra ilay hotely Vilina Vlas, izay sehatra nitrangan'ireo fanolanana sy heloka an'ady.
Lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny 8 Jolay 2020.
Rehefa anaovana fikarohana ao amin'ny Tripadvisor [angl] ity hotely izay sady toerana filonana rano mafana ity, dia ny fampahafantarana toy izao no hita:
Azo ambara hoe ny fanehoankevitra mahery setra nataon'ireo bosniàka mpampiasa aterineto no resahan'io hafatra io, taorian'ny nanombohan'ny dokadoka fampahafantarana ilay hotely, tafiditra ao anatin'ny tetikasa tamin'ny volana lasa (Jona 2020) momba ny fizahantany vatsiana vola, nataon'ireo manampahefana ao amin'ny Repoblika Serba ao Bosnia, rantsana federaly any Bosnia-Herzegovina izay ry zareo Serba no maro an'isa ao.
Tamin'ny 1991, rehefa nanomboka nisamantsamaka i Yôgôslavia, dia ny vondrompiarahamonina nisy ireo Bosniàka no nanome ny antsasaky ny vahoaka tao amin'ny faripiadidian'i Višegrad. Ireo pogroms nikendry ireo Bosniàka sy ny fifindramonina no nampitsimbadika tanteraka io rakitra demaografika io. Latsaky ny 10% sisa ireo Bosniàka niverina nonina eny anivon'ireo mponina ao amin'ilay faripiadidiana.
Nandritra io ady io, vavolombelon'ny sasantsasany tamin'ireo fandripahana feno habibiana nahatsiravina indrindra natao an'ireo Bosniàka ilay tanàna. Indrindra indrindra fa sehatra nitrangan'ireo fandoroana roa niteraka fahafatesana sivily bosniàka niisa 123 maty nodorana velona izy, nielanelana herinandro roa monja, tamin'ny Jona 1992.
Ry Milan sy Sredoje Lukić mirahalahy no nanao ireny habibiana ireny. Tamin'ny 2009, nohelohin'ny Tribonaly Iraisampirenena natao hitsara ny heloka bevava tany Yogôslavia (TPIY) ho nanao heloka bevava nandritra ny ady ireo lehilahy roa ireo.
Nandritra ilay fandripahana bosniàka, ny tanànan'i Vilina Vlas, teo ambany fifehezan'ny Serba, dia iray tamin'ireo toby fanibohana sy fanolanana naharikoriko indrindra. Anjatony ireo vehivavy bosniàka no notazonina toy ny andevo tao. Fanararaotana ara-nofo saika isanandro vaky no nataon'ireo miaramila serba tamin'izy ireo, ary hatramin'ireo hery ivelan'ny tafika, rosiàna sy serba, ihany koa.
Tamin'ireo olona, na vavy na lahy, nahafantatra ny zavanisy tany, marobe ireo malahelo hoe mbola miasa ary tena ao anatin'ny heriny tanteraka ilay hotely Vilina Vlas, sady manohy mandray mpizahatany isantaona. Saingy ny ezaka manokana tao amin'ny Twitter sy Intsagram nataon'ny birao misahana ny fizahantany ao amin'ny Repoblika serba ao Bosnia tamin'ny herinandro farany ho an'ny volana Jona, mba ho fampahafantarana ilay hotely, dia niteraka hasosorana teny anivon'ireo Bosniàka. Tao amin'ny Twitter, marobe ny olona nampiasa ny famaritana hoe « fizahantany mandripaka » (genocidni turizam).
Im-betsaka sy matetika no maka endrika mavitrika ny fandàvana ny fisian'ilay fandripahana. Tamin'ny Janoary 2014, ankitsirano sy tsy nihambahamba ireo manampahefana tao amin'ny Repoblika Serba ao Bosnia nanaisotra ny teny hoe « fandripahana » tsy ho eo amin'ilay vatolahy fahatsiarovana tao amin'ny tanim-pasana bosniàka Stražište de Višegrad. Nisy ihany koa andrana iray saika hamotehana ny iray tamin'ireo trano nandoroana olona velona tamin'ny Jona 1992. Ireo Bosniàka niverina nonina tao an-tanàna no namerina nanangana azy, lasa toeram-pahatsiarovana izy izao.
Ny herisetra tafahoatra sy ny tsy fanomezana na inona na inona hita nandritra iureny taona maro ireny tao Višegrad sy nanerana ny lemaka Drina, ary hatrany amin'ireo tanàna sy vohitra any avaratra-atsinanan'i Bosnia-Herzegôvina, dia vokatry ny politika fandripahana napetraky ny tafiky ny Repoblika Serba ao Bosnia sy ireo vondrona isankarazany manao asa fitandroana filaminana teo ambany fitantanan'ny jeneraly Ratko Mladić, mpanao heloka an'ady efa voaheloka.
Nitranga ireny habibiana ireny, indrindra indrindra fa noho ny mason'izao tontolo izao tsy nitodika afa-tsy tany amin'ny fahirano natao an'i Sarajevo.
Gadra tao amin'ny toby fanibohana tao Trnopolje , akaikin'i Prijedor, tao Bosnia-Herzegovina, tamin'ny 1992. Sary miaraka amin'ny fanomezandàlan'ny TPIY tao amin'ny Wikipédia.
Tanaty lahatsoratra iray tamin'ny 1996, ilay mpifandray avy any am-bava-ady Ed Vulliamy no mitanisa ny fihaonany tamin'i Nikola Koljević, olona akaiky an'ilay mpanao heloka an'ady efa voaheloka, Radovan Karadžić, tao amin'ny efitranoben'ny hotely iray tao Belgrady tamin'ny 1992.
Noesoin'i Koljević ilay mpanao gazety sy ireo mpiaramiasa aminy noho ny zavanisy hoe efa fotoana elabe vao hitan-dry zareo ny fisian'ilay tambajotra-na toby fanibohana tantanin'ireo Serba tao amin'ilay faritra : Omarska, Trnopolje ary Keraterm.
Emir Kusturica, Serba mpamokatra horonantsary, ary malaza erantany, izay nirotsaka ihany koa tamina fandraharahàna ara-pizahantany marobe taorian'ny nivakisan'i Yogôslavia, dia nisafidy ihany koa an'i Višegrad ho toerana honenana taorian'ilay fandripahana.
Ny vavahady be fidirana ao Andrićgrad. Sary natolotry ny mpampiasa Wikipedia UkiUros, nampiasàna lisansa CC BY-SA 3.0.
Tamin'ny 2011, natombony ny tetikasa iray antsoina hoe Andrićgrad (ny tanànan'i Andrić), avy amin'ny anaran'i Ivo Andrić, ilay yôgôslavy mpanoratra ary efa nahazo ny loka Nobel ho an'ny Fandriampahalemana, izay nifantoka tamin'ilay tetezana ottoman tranainy ao Višegrad ny tantara malaza noforoniny, nomeny lohateny hoe Ilay tetezana aeo ambonin'i Drina. Ilay toerana, antsoina ihany koa hoe Kamengrad (ilay tanàna vita tamin'ny vato), dia nadika avy amina lapa mimànda fony vanimpotoana antenantenany (medievaly).
Ilay toerana ao Andrićgrad koa dia naorina teo ambonin'ny toerana nisy ilay toerana fanaovana fanatanjahantena fahiny nampiasaina ho toy ny toby nanatobiana ireo bosniàka sivily nandritra ilay fandripahana, taona folo talohan'izany.
Tamin'ny 2012, nambaran'ny Fitsarana momba ny Lalampanorenana ao Monténégro fa tsy mahefa izy hitsara an'ilay mpanoratra ao Monténégro, Andrej Nikolaidis, izay notorian'ilay mpamokatra horonantsary hoe nanàla baràka azy. Nampiditra fitoriana an'i Nikolaidis i Kusturica noho ny nanambaràny tamin'ny 2004 hoe ny sarimihetsika novokariny taorian'ny ady dia nahazo famatsiambola, na avy amin'ny rantsan'ny fitondran'i Milošević, na avy amin'ny fitondrana serba taorian'i Milošević, ary tokana ny tanjona tao an-dohany: hampahafantatra (hampiroborobo) ny kabary nasiônalista serba.